Pot Odds Calculator: Had iyo jeer samee go'aanka saxda ah ee ciyaaraha turubka internetka!
Pot Odds Calculator waa barnaamij loogu talagalay nidaamyada Windows ee loo isticmaalo go'aaminta ku habboonaanta ama haddii kale ee loogu yeero khamaarka ka soo horjeeda inta lagu jiro ciyaarta lacagta ee Texas Hold'em poker.
Marka yaanan ka hadlin tartamada, laakiin ku saabsan ciyaarahaas oo isbeddelka ama kumanaan yuurada ahi duulaan oo ku saleysan heerka indhoolayaasha.
Si aan ugu sahlanaato waxaan u degnaa isbedel yar, sidoo kale maxaa yeelay ruuxa ThatsLuck maahan in la tababaro sharkiga miiska cagaaran, laakiin waa in la tababaro dadka isticmaala inay had iyo jeer sameeyaan xulashada ugu fiican, iyadoon loo eegin ciyaarta la tixgelinayo.
Sida loo xisaabiyo khilaafaadka dheriga khadka tooska ah ee internetka: adoo adeegsanaya softiweerka
Markaad soo dejiso oo aad ka furto faylka zip-ka dusha desktop-kaaga, waa inaad bilowdaa fulinta oo barnaamijkuna wuxuu diyaar u noqon doonaa inuu isla markiiba isticmaalo.
Sida aad u aragto shaashadda Pot Odds Calculator waa mid gaar ah wuxuuna ka kooban yahay dhammaan howlaha xisaabinta ee la bixiyo.
Xitaa cabirka daaqada si ula kac ah ayaa looxakameeyay, tan si loo awoodo in lagu meeleeyo barnaamijka agtiisa daaqada miiska ciyaarta adoon kufarin desktop-ka waxbadan.
Aynu isla markiiba aragno tusaale wax ku ool ah oo adeegsi ah: aan dhahno waxaad ku fadhidaa miis ka mid ah waxa loogu yeero xadka micro, ama miisaskaas oo ay ku yaalliin qaddarka indhoolayaasha.
Laga yaabee inay kuguula muuqan doonto wax qariib ah, laakiin inta badan waxaan maqlaa agagaarka in xadadka yar-yar uu hadda yahay heerarka ugu faa'iidada badan ee la ciyaaro, maxaa yeelay heerarka ugu sarreeya xirfadaha ciyaartoyda wanaag iyo xumaanba waa loo siman yahay sidaa darteedna qolka turubka si loo helo oo keliya waa mahadsanid rakiba. lacagta la qabtay.
Ku noqo tusaalaha: Waxaad ku haysaa Q iyo J loox ka dib wareegga 5-10-K-2.
Meel gaar ah oo gacanta ah, foorarka iyo leexashada ka dib, ciyaaryahanka ka hor intaadan sharad ku bixin 10 senti waxaadna gacanta ku haysaa isku aadka tooska ah ee laba geesoodka ah ee tooska ah ee gacantaada, taas oo ah, haddii 9 ama A ay soo baxaan, waad xirmaysaa barta iyo sida loo maleynayo inuu ku guuleysto gacanta.
Dheriga waa 90 senti: ma sax baa in la yiraahdo 10 cent bet oo Wabiga ka horreeya?
Marka aan saxo waxaan ula jeedaa in mustaqbalka fog doorashadu faa'iido leedahay (EV +).
Iyada oo ku saleysan waxa uu inoo sheegayo Pot Odds Calculator jawaabtu waa HAA, maxaa yeelay hadaad ku eegto sawirka barnaamijka 8 out (8 kaar oo kaa dhigaya inaad xiratid barta, taasi waa afarta 9s iyo afarta Aces), Dheriga waa inuu ahaadaa ugu yaraan 47 senti si loogu yeero sharad 10 senti oo ku taal Webiga hortiisa iyo maadaama dherigu yahay 90 senti, wicitaanku waa sax.
Marka ugu dambayntii waxaan dhihi karnaa taas Pot Odds Calculator waxaa loo isticmaali karaa in marwalba la sameeyo go'aanka ugu fiican, ama waxaad ku sii furi kartaa miiska agtiisa inta lagu guda jiro ciyaarta, waxaadna u isticmaali kartaa oo keliya haddii gacan gaar ah oo muhiim ahi la timaado go'aan adag oo la sameeyo.
Dhammaan ma caddahay? Waxa kaliya ee ay tahay inaad barato si maskax ahaan loogu xisaabiyo duulimaadka waa dibeddaada si aad u xirto barta; tusaale labo gacmood oo gacanta ku haya si aad u sameysid seddex nooc noocyadaada ah waa kaliya 2, si aad uxirto biyo raacinta 2 kaar oo sabuurada ka baxeysa waa 9 (waxay noqon doontaa 13 laga jaro 2 iyo 2 sabuuradda). on, shabaqa miisas fara badan oo diyaar ah oo leh xogtan ayaa si fudud loo heli karaa.
Soo Degso Fayl	POdds.zip - 1 MB